जिटिए चुनाउको लागि गोरामुमोको जनसम्पर्क अभियान : विमल खेमा र गोरामुमोको फाटोले के सङ्केत गर्दैछ? - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिन जिटिए चुनाउको लागि गोरामुमोको जनसम्पर्क अभियान : विमल खेमा र गोरामुमोको फाटोले के सङ्केत गर्दैछ?
November 30, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन 0
मन घिसिङ जनसम्पर्क अभियानमा निस्कनको पछि पनि एउटा ठूलो कारण छ, त्यो के हो भने बिमल खेमाका प्राय: परिचित मुहारहरु अहिले विभिन्न कारणहरुले दार्जीलिङ पहाडमा छैनन्। त्यसैले मन घिसिङ आफ्नो पिताको छवि साथमा लिएर जिटिए चुनाव घोषणा गर्न अघिनै जनता समक्ष आफुलाई चिनाउन खोजिरहेका छन्।
गोरामुमो प्रमुख मन घिसिङको जनसम्पर्क अभियान सम्बन्धि दार्जीलिङ पहाडमा अहिले जल्दोबल्दो राजनीतिक चर्चा चलिरहेको छ। यसले केही प्रश्नहरु उठाएको छ। केही दिन अघिदेखि जनताको समस्या बुझ्न भनेर घिसिङ जनसम्पर्क अभियानमा निस्किएका थिए। तर प्रश्न कहाँ गएर उठ्न लाग्यो भने जब घिसिङको जनसम्पर्क अभियानमा बङ्गाल पुलिसले उनलाई सुरक्षा दिइएको तस्वीर सामजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।
गोरामुमोअनुसार उनीहरुले सुरक्षा लिएको कारण भने कुनैपनि असामाजिक घटनाहरु नघटोस् भन्ने बताइएको छ, तर यसको प्रतिक्रिया भने बिमल खेमाको पक्षबाट अर्कै आएको छ। बिमल खेमाका एक शिर्ष नेताको भनाई अनुसार मन घिसिङलाई राज्य सरकारले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
राज्य सरकारले मन घिसिङलाई पो अब जिटिएमा राख्ने हो कि भनेर बिमल खेमाले भन्न थालिसकेका छन्।
लोकसभा अनि विधानसभा चुनावमा एककृत भएर लडेका बिमल खेमा अनि गोरामुमो बीच फाटो रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ।
यो फाटोको शुरुवात लगतै दुइवटा चुनावको समापन पछि देखिन थालेको थियो। तर जब केही दिन अगाडि राजु बिष्टले सदनमा पहाडको निम्ति त्रिस्तरीय पञ्चायतको माग उठाए, त्यस समयदेखि बिमल खेमाले त्यस मागको समर्थन गरे भने गोरामुमो त्यसलाई राजु बिष्टको राजनैतिक अपरिपक्कतासम्म बताएका थिए।
सुत्रको जानकारीमा विश्वास गर्नु हो भने बिष्टको झुकाउ पनि गोरामुमोप्रति नरहेर बिमल खेमा प्रति नै धेर रहेको छ। चर्चा के छ भने गोरामुमोका नेताहरू अब जिटिए चुनावलाई ध्यानमा राख्दै जनसम्पर्क अभियानमा हिँडेका हुन्। लोकसभा अनि विधानसभा चुनावमा जनताले गोरामुमोलाई नहेरेर नरेन्द्र मोदीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अनि बिमल गुरुङप्रतिको स्नेहलाई सम्झेर भोट जिताएको एक खेमाले प्रचार गरिरहेकै छ।। त्यसैले आगामी दिनहरुमा जिटिए चुनाव हुनगए गोरामुमो अनि बिमल खेमाले आ-आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारिता जनाउने सङ्केत स्पष्ट भइसकेको छ।
विस्तारै गोरामुमो र विमल खेमाबीच फाटो बलियो बन्दैछ। यता राजु विष्ट र निरज जिम्बाबीच पनि उस्तै फाटो बढिरहेको छ। दिल्लीमा राजु विष्टलाई भेटेर आएदेखि मन घिसिङ राम्रो खबर आउँछ भन्दै जनम्पर्क अभियानमा छन्।
चर्चा अनुसार, मन घिसिङले राजु विष्टबाट भाजपाले पहाडको लागि केही नगर्ने बुझिसकेका छन्। भाजपा विभिन्न बाहाना गरेर जिटिएको चुनाउ नै ताकिरहेको घिसिङले बुझेका छन्। त्यसैले उनी जन सम्पर्क अभियानमा लागेका हुन्। अर्को कुरा भाजपाले केही गऱ्यो भने त्यो छैटौं अनुसूची नै हो भन्ने बुझिसकेका मन घिसिङले लामो रणनीति हातमा लिएर जन सम्पर्क अभियान थालेका हुन्।
भाजपाले कुनै व्यवस्था नल्याएसम्म पहाडमा जिटिएलाई नै जिउँदो राख्नुपर्ने केन्द्र र राज्यलाई बाध्यता छ। पहिले जिटिए हातमा लिने र हातमा लिइसकेपछि त्यसलाई भङ्ग गरेर भाजपाले पहाडलाई अर्को व्यवस्था दिन्छ भन्ने कुरा गोरामुमो खेमाले दिल्लीमा नै बुझिसकेको छ।
त्यसैले अहिलेदेखि नै जनसम्पर्क अभियान गर्दै जनतालाई मन घिसिङले बुझाउन शुरु गरेका छन्। लोकसभा र विधानसभा चुनाउमा विमल खेमाले श्रेय लिएको गोरामुमोलाई पचेको छैन। जिटिए चुनाउमा गोरामुमो आफै लड्ने र विमल खेमाको पहाडमा अस्तित्व नभएको सावित गर्ने दाउमा गोरामुमोले काम शुरु गरिसकेको छ।
बङ्गालले पनि मन घिसिङको दुरगामी राजनीति बुझेर सुरक्षा प्रदान गरिरहेको विमल खेमाले बुझिसकेको छ।